Caafimaadku waa halbowlaha nolosha. | Gaaldiid - Part 46760552713
Caafimaadku waa halbowlaha nolosha.
Bogga Hore > Caafimaadku waa halbowlaha nolosha.
Sii akhri Help us to collect: 1,000
KAGA FARXI AGOON MAALINTA CIIDA
Bismillah: Sida ku cad shuruudaha barnaamijka Go’aanqaadasho Q 3aad, waxa laga rabaa xubnaha barnaamijka inay bixiyaan sadaqo dhan $30 ama sodon dollar oo loogu deeqayo caruur agoomo ah, si ay ugu suurtawdo inay iibsadaan dharka...
Sii akhri Help us to collect: 3,000
AFURI WALAALKAA + GO’AANQAADASHO Q2AAD
Bismillah: Barnaamijkii Go’aanqaadasho qeybtiisii labaad waxa shuruudihiisa kamid ahaa in xubnaha ka qaybgalayaa ay bixiyaan ugu yaraan lacag gaadhaysa toban dollar si ay uga qaybqaataan afurinta dadka masaakiinta ah ee soomaya bisha barakaysan ee...
Donation/Ugu Deeq Bogga
Macaanka Nooca 2aad
Tusmo1 Insulin waa hormoon ay u baahan yihiin unugyada jirku si ay u qaataan sonkorta ku jirta dhiiga. Hadii aad qabto Nooca 2aad ee Macaanka ma jirto Insulin ku filan jirka sidaa darteed sonkor...
Macaanka Nooca 1aad
Insulin waa hormoon isu dheeli tira sonkorta dhiiga ku jirta. Hadii qofku uu qabo xanuunka Macaanka gaar ahaan Nooca 1aad (Type 1) waxa jirku joojinayaa soo daynta Insulin, waxayna sababaysaa in sonkor badan ku...
Waa maxay Kolestaroolku? Kolestaroolku waa shay dufan ah oo jirku u baahanyahay inuu adeegsado, waxaana loo isticmaalaa si loo dhiso unugyada jirka iyo hormoonada. Waxaa lagu sameeyaa beerka sidoo kale waxa laga helaa cuntada ka timaadda...
Dhiigkarka:- Dhiig karku waa cadaadiska dhiiga oo kor u kaca, cadaadiska dhiiguna waa cadaadiska ka dhashy dhiiga ka imanaya wadnaha ee ku socda unugyada jidhka ama dhiiga ka imanaya unugyada jidhka ee ku socda...
Ciriqa waxa keena dhiiga oo urura kadibna sameeya xinjir awda xididka, taasoo keenta in ay adkaato isu socodka dhiigu. Dhiigaas xinjiroobay waxa uu u gudbi karaa xubno kale oo jidhka ah sida sanbabada. Ciriqa...
Sumoga dhiigu waa xanuun halis ah oo naadir ah waxaana sababa bakteeriya soo gasha dhiiga. Marka bakteeriyadu soo gasho dhiiga waxa jirku isku deyayaa inuu is difaaco taas oo keenta in uu qofku bukoodo....